Mmiri a ga - enyere gị aka ịgba ụgbọ eletrik gị ma ọ bụrụ na batrị gị agwụ | Akụkọ akụrụngwa
Mmiri a ga-enyere gị aka ịgba ụgbọ eletrik gị ma ọ bụrụ na batrị agwụ
Gbọ ala eletrik ahụ bụ ọdịnihu bụ ihe ole na ole n'ime anyị na-enwe obi abụọ taa. Na nsogbu batrị batrị yikwara ka edozi ya bụ ihe ọtụtụ ndị ọrụ na-ekwenye. Ndụ batrị ka fọrọ otu ihe ahụ ka afọ 10 gara aga, teknụzụ nke ọ dị ka ọ naghị agabiga.
Mgbe ị na-anwale batrị ọhụrụ iji nwekwuo ikike nchekwa, ụfọdụ ụlọ ọrụ na-ele anya n'ọdịnihu, na-ekepụta ngwaọrụ nke na-ekwe ka ụgbọ ala eletrik, enwe ike ịmalitegharịa ma ọ bụrụ na batrị ha agwụ. Ihe omuma atu doro anya bu nke ndi drone nke gha enyere anyi aka itinye ugbo ala eletrik anyi ma oburu na odi.
Balọ ọrụ Baek na-arụ ọrụ enyemaka ọrụ n'okporo ụzọ maka ụgbọ ala eletrik nke ga-emesị kwụsị batrị n'ụdị drone. Ọrụ a dị mfe, ebe ọ bụ naanị na anyị ga-arụ ya rịọ enyemaka site na ngwa mkpanaaka, ngwa nke eji ebe ekwentị, nwere ike ịchọta anyị ngwa ngwa iji nye anyị ụgwọ dị mkpa iji nwee ike iru ụlọ ọrụ ọrụ ebe anyị nwere ike ịgba ụgbọ anyị.
Mmiri ahụ n'onwe ya ga-etinye ihe njikọ njikọta nke kwekọrọ n'ụgbọ ahụ, ọbụlagodi ruo mgbe ụlọ ọrụ ahụ ga-ekwenye na otu ụdị njikọ, njikọ nke anyị ga-ewepụ site na mmiri mmiri ma banye n'ime ụgbọ anyị. Ogo nke drone ahụ, agaghị abụ ihe ekwuru obere, ebe ọ bụ na ọ ga-enwerịrị batrị ike zuru oke iji kwe ka ịchaba akụkụ nke batrị ụgbọ ala ka ọ nwee ike iru ebe a na-akwụ ụgwọ dị nso.
Echiche ahụ n'onwe ya adịghị njọ, mana maka ụdị drone a iji hụ ìhè ahụ, ụlọ ọrụ ahụ ga-enwerịrị ọtụtụ nkwekọrịta azụmahịa ka o wee nwee mkpuchi na mba niile. Ma, nsogbu a nwekwara ike-edozi na-ebu batrị na mpụga n'ime ụgbọ ahụ n'onwe ya na anyị nwere ike iji naanị ikpe akọwapụtara. Ọzọkwa, o yighị ka onye nwere ụgbọ eletrik ga-abụ onye nzuzu mgbe ọ na-eme njem ọ maara na ụgwọ ụgbọala ahụ ezughị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Mmiri a ga-enyere gị aka ịgba ụgbọ eletrik gị ma ọ bụrụ na batrị agwụ
Nke a bụ ihe mmalite ọhụụ nke ụgbọ oloko ndị Japan dị, igwe nwere ike iru 360 km / h
Ememme Nkiri nke Cannes na-akwado ntinye nke ihe nkiri site na ọrụ ntanetị